ကျွန်တော် ဘာသာမဲ့ ……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ကျွန်တော် ဘာသာမဲ့ …….
ကျွန်တော် ဘာသာမဲ့ …….
Posted by fatty on Aug 19, 2010 in Buddhism, Creative Writing |4comments
ကျနော်ဟာ ငယ်စဉ်က ဘာသာမဲ့ တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မိရိုးဖလာကတော့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာပါ။ သရဏဂုံ သုံးပါး တည်လိုက်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်လို့ လည်းဆိုကြပါတယ်။
ငယ် စဉ်က သရဏဂုံ သုံးပါးကို လေးလေးနက်နက် တည်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ယခုအသက်ကလေး ရလာတော့ ဘာသာရေးကို စဉ်းစားမိပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး
လက်လှမ်းမီရာ စာအုပ်များလည်းဖတ်။ ဒီ ဆိုဒ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့စာစု များကိုလည်းမလွတ်တန်းဖတ်ပါတယ်။ ယခုလောကကြီးဟာ ရုပ်ဝါဒ ကြီးစိုး နေတဲ့
လောကကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တဖက် ကလည်း ရုပ်ဝါဒကြီးစိုးနေ၊ တဖက်ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာချင်ယုံမက လိုက်စားချင် ..ဆိုတော့အခက်အခဲတော့ကြုံရပါတယ်။
စားဝတ်နေရေးကလည်းရှိတော့ လိုချင်စိတ် လောဘစိတ် အနည်းငယ်နဲ့ နေရပါတယ် …… ဘာသာရေး လိုက်စားပြီး ကိုယ် နားလည်သလောက် အားထုတ်ကြည့်တော့
လောဘစိတ် နဲပါးလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော် သမာဓိ ကို အဓိက အား စိုက်ပြီး မလုပ်ပါဘူး နေ့စဉ်လူမှုကိစ္စ ကလည်းရှိသေးတာကိုး။ ဒါကြောင့် မြင်မြင် သမျှကို
၀ိပဿနာ တင်ပြီး ဆင်ခြင် ပါတယ်။ ……ပြ ဿနာက လူတွေနဲ့စကားပြောရတာ ဂွကျလာပါတယ်။ လုပ်ရကိုင်ရတာလည်း ဂွကျလာပါတယ်။
ရောင်းသမျှဝယ်သမျှလည်း မမြတ်ချင်နေ … လိုချင် လည်း ယူသာသွား … အ၀တ်အစားမှာလည်း လူတော တိုး အောင် မ၀တ်ချင်တော့….. အိမ်ရှင်မကအစ ခပ်ကြောင်ကြောင်
နောက်တခုကတော့ ….. မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အများအားဖြင့် ….ဘယ်နားမှာတော့ ဘယ်အရပ်မှာတော့ ရဟန္တာ ပေါ် နေပြီတဲ့ ဆိုရင် ပြေးပြီးဖူးကြတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။
ရဟန္တာ ဖြစ်သည် ဖြစ်စေ။ ရဟန္တာ မဖြစ်သေးသည်ဖြစ်စေ ကောင်းမှုကုသိုလ် တော့ရတန်သေ၇ွ့ရကြမှာပါ။ အဲဒီမှာ …ကျနော့အနေနဲ့ …ရဟန္တာဖြစ် မဖြစ် ဘယ်လိုခွဲခြား
သိနိုင်ပါသလဲ။ ရဟန္တာ ကိုယ်တော်မြတ်တို့၏ စိတ် သည် မည်သို့ရှိပါသလဲ …. သိချင်လာပါတယ်။
လူဖြစ်မှတော့ လူတန်းစေ့ နေနိုင် အောင်ကြိုးစားရမယ် …. သားသမီးတွေ ကို လူတန်းစေ့ ထားနိုင်ရမယ် … ကိုယ်လွတ်ရုံးမထွက်ပါနဲ့ … ဆိုတာတွေကလည်း ….ကျနော့အတွက် ကန့်လန့် ခံနေပါ တယ်။ …..ကျေးဇူးပြုပြီး ..ဆွေးနွေးပေးကြပါ ၇န် …….
ခင်ဗျား ရဟန္တာဆိုတာ ဘာလဲသိချင်ရင် http://www.mediafire.com/kotseikkosit ထဲက ၀၇-သဲအင်းအမေးအဖြေနဲ့ ၀၂-သဲအင်းဟောတရားတွေကိုနာကြည့်ပါ။ ဦးသန်းထွန်း ကိုယ်တွေ့ ဖိုင်အစမှာ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရဟန္တာတာ ဆိုတာဘာလို့ အတိုပြော ဆုံးမထားတာရှိတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ နိဗ္ဘာန်ဆိုတာ စ်ိတ်နဲ့ဝင်တာ၊ ရုပ်နဲ့ ဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ လူတွေက သူများစိတ်ကိုတော့ စစ်ကြတယ်၊ ကိုယ့်စိတ်တော့ ကိုယ်မစစ်ကြဘူး။ သောတာပန် သံပုရာသီးစားရင် ချင်တယ်ဗျာ၊ သဒါဂမ် သံပုရာသီးစားရင် ချင်တယ်ဗျာ၊ အနာဂမ် သံပုရာသီးစားရင် ချင်တယ်ဗျာ၊ ရဟန္တာ သံပုရာသီးစားရင် ချင်တယ်ဗျာ၊ နို့ ပေမဲ့…. (အနည်းငယ်နားလိုက်ပြီး) စိတ္တာသင်္ခါရ တွေချုပ်နေတာ ဘယ်သူသိသလဲလို့ ခပ်ထန်ထန်လေးမေးလိုက်တယ်။ http://www.theinngu.net မှာလည်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရားဖိုင် ၁၀၀ တိတိ နာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က သဲအင်းကို ညွှန်တာက သူ့ တရားကိုကျင့်ဖို့ဘာစာအခြေခံမှ မလိုပါ။ ဆရာတော်ကြီးကိုတိုင်လည်း လူဘဝက ဒမြဗိုလ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး စာလည်းမတတ် ပါ။ ၂၁လတိုင်တိုင် အရိုးကြေကြေ အရည်ခန်းခန်း သေရင်သေ မသေရင်တရားရ ဆိုပြီး မိမိခန္ဓာက ရှာထားတဲ့ အသိနဲ့ ဟောခဲ့တဲ့တရား တော်တွေဖြစ်လို့နိဗ္ဘာန်အကျိုး မျော်ကိုးကာ ဆော်နိုးလိုက်ရပါကြောင်း။
အင်း ဒါလည်း စဉ်းစားစရာဘဲ။ ရဟန္တာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာတော့ မသိချင်ဘူး။ ကိုယ်လဲ ရဟန္တာဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူဖြစ်မှတော့ တယောက်ထည်း ထူးပြီး ထော်လော်ကန့်လန့် လုပ်နေလို့မရဘူး။ တောထွက်ပြီး ကျင့်နေတယ်ဆိုရင် တမျိုးနော်.. ။
၀င်ဆွေးနွေးပါဆိုလို့ ပါဝင် ဆွေးနွေးလိုက်ပါသည်။ ရဟန္တာဆိုတာ ဘာလဲ သိချင်ရင် ကိုယ်တိုင် ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ လွယ်လွယ်ပြောလို့ရတယ်။ ပြီးစလွယ်ဖြစ်သွားရင်တော့ ပြန်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ သောတပန် သဒါဂမ် အနာဂမ်တွေ တောင်မှ ဘယ်ရဟန်းက ကိစ္စ ပြီးသလဲ မသိနိုင်ပါဘူး။ သိတယ်ဆိုတာက သူများ စိတ်ကို သိနိုင်တဲ့ ဥာဏ်ရမှ သိနိုင်တာပါ။ ဘယ်ရဟန်းမှ ထူးတယ် မထူးဘူးလို့ မသတ်မှတ်ဘဲ အားလုံးက သံဃာဘဲလို့ စိတ်ထဲ သတ်မှတ်လိုက် ဒါဆိုရင် ဘာလှူလှူ ပို အကျိုးများတယ် ဘုရားဟောတွေမှာ သတိထားမိသလောက်က စိတ်သာ အဓိကထားတာတွေ့ပါတယ်။ တရားကျင့်တယ်ဆိုတာလည်း စိတ် ငြိမ်အောင် လုပ်ပြီး ၀ိပသနာ ကျင့်ကြံအားထုတ်တာပါ။ အကုသိုလ် ဖြစ်အောင်လည်း စိတ်က လုပ်စေတာဘဲ ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်း စိတ်က တွန်းပို့နေတာပါ။ သေချာတာ တခုကတော့ လူတွေက ကိလေသာတွေ ထူပြောကြတဲ့ အတွက် ရုပ်တွေက မကြည်ပါဘူး တရား အားထုတ်သူတွေမှာတော့ ရုပ်က ကြည်နေတတ်ပါတယ် ဥပတိရုပ်ကြည်တယ် ဆိုပါတော့။ တရားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေသူ အဖို့ အပြောအဆို အနေအထိုင် တခြား လူတွေနဲ့ မတူတာကို တော့ သတိထားမိနိုင်ပါတယ် ရဟန်းကိစ္စပြီးတဲ့ ရဟန်းကိုတော့ ဘယ်လိုမှ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ မတွေ့နိုင်လို့ လွယ်လွယ် မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ အားလုံးကို သံဃာလို့သာ သတ်မှတ်စေချင်တယ်။
ပါဝင်ဆွေးနွေး ပေးကြသူများကို တလေးတစား ကျေးဇူးအထူးတင် ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။